Ruushka: Magaalada Raqqa khariidadda adduunkaa laga tiray - BBC News Somali
Ruushka: Magaalada Raqqa khariidadda adduunkaa laga tiray
23 Oktoobar 2017
Burburka baaxadda leh ee soo gaaray magaalada Raqqa
Ruushka ayaa xulafada uu Maraykanku hogaaminayo ku eedeeyay in duqayntoodu ay "khariidadda dunida ka tirtay" magaalada Raqqa ee dalka Suuriya, arrintaasina ay dhacday intii ay wadeen dagaalkii ka dhanka ahaa Kooxda isku magacawda Iawladda Islaamka
Xoogagga Dimuqraadiga ah ee Suuriya ee magacooda loo soo gaabiyo SDF ayaa sheegay in ay toddobaadkii hore la wareegeen magaalada Raqqa, Axaddiina waxay sheegeen in ay la wareegeen meesha saliidda ugu badan laga soo saaro ee dalka Suuriya.
Sawirrada laga helayo magaalada Raqqa ayaa muujinaya in ay aad u baabaday, Ruushkuna wuxuu burburka la simay midkii ay xulafo u gaysateen magaalada Dresden ee dalka Jermalka intii lagu gudo jiray Dagaalkii Labaad ee Adduunka.
Xulafada uu Maraykanku hogaaminayo ayaa sheegay in ay isku dayeen in ay yareeyaan halista soo wajahaysa shacabka.
Ruushka laftirkiisana waxaa lagu eedeeyay in uu dambiyo dagaal ka gaystay Xalab ka dib markii uu halkaas duqaymo ka gaystay sannadkii hore.
'Weerarrada Raqqa dad badan baa ku dhimanaya'
Suuriya: Duulaan kama dambays ah oo lagu qaaday magaalada Raqqa
Xoogaga mucaaradka Suuriya oo duulaan xooggan ku qaaday Raqqa
Dambibaareyaal ka socda Qaramada Midoobay ayaa toddobaadkii hore sheegay in dad badan oo shacab ah ay ku dhinteen magaalada Raqqa.
Qolyaha xuquuqda aadanaha u dhaqdhaqaaqa ee Suuriya waxay sheegeen in ay ku dhinteen inta u dhaxaysa 1,130 ilaa 1,873 ruux oo shacab ah, dadkaas intooda badanna ay ku dhinteen duqaymihii uu Maraykanku hogaaminayay ee ciidammada SDF ee ay ku midaysan yihiin malayshiyaadka Kurdiyiinta ah iyo kuwa Carabta gacanta ka siiyay in ay magaaladaas guul ka gaaraan.
Afahayeen u hadlay wasaaradda gaashaandhigga ee Ruushka ayaa sheegay in burburka raqa uu u egyahay kii magaalada Dresden.
Wuxuu sheegay in ay hadda u muuqato in Reer Galbeedku ay u degdegayaan arrimaha gargaarka si ay u daboolaan caddaymaha dambiyada ay gaysteen.
Xulafada uu Maraykanku hogaaminayo waxay sheegeen in ay meelo cayiman duqaynayeen ayna qaadayeen tallaabooyin looga golleeyahay in lagu yareeyo khasaaraha.
Image caption Sawirka magaalada Dresden ka dib markii ay xulafo duqeeyeen 1945
SDF ayaa todobaadkii hore guul ka sheegatay magaalada Raqqa ka dib markii ay afar billood dagaal ugu jireen dib uga qabsashada kooxda Dawladda Islaamka isku magacawda oo magaaladaas ka arriminaysay saddex sano.
Intaas ka dibna waxay sheegeen in ay gacanta ku dhigeen xarunta shidaalka laga soo saaro ee Al-Omar, oo ah meel muhiim ah oo ay malayshiyadu dhaqaale ka heli jirtay.
Suuriya: Duqaynta oo biyihii ka jartay magaalada Raqqa
Xulafada Maraykanka oo markii u horaysay diyaarad dagaal ka soo riday Suuriya
Dagaalka ka dhanka ah malayshiyada ayaa hadda diiradda saaraya gobolka Deir al-Zour ee Suuriya oo ah meesha kali ah ee ay ku xoog badan yihiin.
Ciidammada Suuriya oo ay xoojinayaan quwadaha diyaaradaha Ruushka iyo malayshiyaadka Iiraan ayaa sidoo kale weerar ku haya kooxaha xag jirka ah.